July 16, 2019 Mahamoud Batalaale
RASMI: Kooxda Juventus ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in ay la soo saxiixatay da’yarkii kooxda Olympique Lyonnais ee Hamza Rafia kaas oo ay ka bixiyeen €400,000 kun oo gini waxayna lacagtani gaadhi doontaa ilaa €5 milyan yuro.
have officially signed n bonuses and 20 per cent resale cut
RASMI: Kooxda Paris Saint-Germain ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in ay la soo saxiixday difaacii kooxda Borussia Dortmund ee Abdou Diallo . PSG ayaa 23 sano jirkan ka soo bixisay 32 milyan yuro waxayna sii wadaa maal galinta kooxdeeda ee ciyaartoyda ay xagaagan ciyaartoyda qiimaha hoose ah ay la soo saxiixanayso.
RASMI: Barcelona ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in ay dhaqan galisay qodob ugu jijray heshiiskii uu Marc Cucurella kula joogay kooxda Eibar waxayna Barca shaacisay in ay 4 milyan yuro xidigan ka soo bixisay kadib markii uu bandhig fiican ka soo sameeyay kooxda Eibar iyada oo hadda Curcurella uu Camp Nou ku soo laabanayo.
Dhinaca kale Barcelona ayaa Liverpool kula tartamaysa difaaca kooxda Real Betis ee Junior Firpo kaas oo tan iyo xagaagan lala soo xidhiidhinayay kooxaha Liverpool iyo Barca. Barcelona ayaa Liverpool ka dul qaadi karta saxiixa Firpo iyaga oo heshiiskiisa qayb uga dhigi kara Juan Miranda oo ay Betis amaah ku siin karaan. (Mundo Deportivo).
Difaaca Man United eeVictor Lindelof ayaa cadeeyay in uu mustaqbalkiisu yaalo Manchester United inkasta oo uu wakiilkiisa Hasan Cetinkaya uu dhawaan shaki galiyay in Lindelof uu United sii joogi karo iyada oo Barcelona xiiso ka muujisay. (Sky Sports)
Kooxda xagaagan wacdaraha ka dhigaysa suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee Atletico Madrid ayaa doonaysa in ay bartilmaameedka kowaad ka dhigato xidiga waqtiga dheer Real Madrid lala xidhiidhinayay ee Christian Eriksen kaas oo galay 12 kii bilood ee heshiiskiisa Tottenham ugu danbeeyay. ( Evening Standard)
Manchester United ayaa isku diyaarinaysa dalab 70 milyan gini ah oo ay ka gudbinayso xidiga khadka dhexe ee kooxda Lazio ee Sergej Milinković-Savić.laakiin Lazio ayaa xidigan waqtiga dheer ay United doonaysay waxay ku qiimaynaysaa £90m . ( Sky Italia)
Kooxda AS Roma ayaa doonaysa in ay Gonzalo Higuaín ka dhigto kabtanka kooxdeeda si ay ugu qanciso in uu ka soo wareegi karo Juventus. (Corriere dello Sport)
Xidiga xulka England iyo kooxda Tottenham ee Kieran Trippier ayaa u safraya magaalada Madrid si uu tijaabada caafimaadka ugu maro kooxda Atlético kadib markii ay Tottenham ogolaatay dalab £20 milyan gini ah oo ay Atletico Madrid soo gudbisay. (ilwareedyo badan)
Mauro Icardi ayaa kalidii tababarka qaadanaya kadib markii uu iskaga hadhay kooxdiisa Inter Milan ee ay iskhilaafsan yihiin wuxuuna sugayaa in uu helo koox uu ku biiri karo. ( Tuttosport)
Man United ayaa dalab 50 milyan gini ah ka gudbisay xidiga ay tan iyo xagaagan daba socoto ee Bruno Fernandes laakiin kooxda Sporting Lisbon ayaa xidiga reer Portugal ku qiimaynaysa ilaa £70 milyan gini. (Daily Mirror)
RASMI: Kooxda Everton ayaa si rasmi ah u shaacisay in xidigii hore kooxda Man City ee Fabian Delph uu kooxdeeda u xidhan doono No.8 iyada oo Andre Gomes oo ay si rasmi ah ugla wareegeen Barcelona uu iska kooxdeeda u qaadan doono No.21 ka.
Arsenal oo ay kooxda Celtic ka soo diiday laba dalab oo uu kii ugu danbeeyay 25 milyan gini ku qiimaysnaa ayaa markii saddexaad isku diyaarinaysa in ay dalab cusub ka gudbiyaan difaaca Kieran Tierney. (Express)
Harry Maguire ayaa seegaya kulanka saaxiibtinimo ee ay caawa kooxdiisa Leicester City la ciyaareyso Scunthorpe iyadoo iyada oo uu ku sii dhawaanayo in uu ku biiro Man United. (Daily Mirror)